मोर्चाबन्दी विरुद्ध मोर्चाबन्दी !
रिपोर्टमंगलवार, जेठ ९, २०७४
२६ चैत २०७३ मा सिरहाको लहानमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम
९ जेठ (मंगलबार) दिउसो । नेकपा एमाले सिराहका इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठलाई जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आयोजना गरिएका चुनावी कार्यक्रममा भ्याइ–नभ्याई थियो । सिराहाको गोलबजार नगरपालिका वडा नम्वर ७ र ८ का भेलालाई सम्वोधन गरेर आएका उनी मिर्चैया नगरपालिकाको सिक्रौनमा आयोजना गरिएको अर्को कार्यकर्ता भेलामा जाने हतारोमा थिए । त्यसलगत्तै लक्ष्मीपुर पटारी गाउँपालिकाको कार्यममा सहभागी हुने अर्को कार्यतालिका थियो ।
३१ जेठमा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनले बढाएको श्रेष्ठको यो व्यस्तताको चुरो सिराहामा एमालेलाई पहिलो शक्तिको रुपमा उभ्याउने लक्ष्यसँग जोडिएको छ ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नौ सयको मत अन्तरले पराजित श्रेष्ठ विहानदेखि रातिसम्म वडा वडाका कार्यक्रममा खटिरहेका छन् । आफूसँगै जिल्लाका अरु नेतालाई पनि उनले यसैगरी परिचालन गरेका छन् ।
प्रदेश–२ अन्र्तगत पर्ने मधेशका आठ जिल्लाका स्थानीय तहमा एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी हुने चर्चा चलिरहेको छ । कतिपयले ‘एमाले हराऊ’ अभियान शुरु हुने अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । यही कारण पनि हुनसक्छ, जिल्ला तहका एमाले नेताहरु पार्टी विरुद्ध हुने मोर्चाबन्दीलाई प्रभावी हुन नदिने प्रयासमा लागेका देखिन्छन् ।
एकातिर आफ्ना कार्यकर्ता जोगाइराख्न एमाले नेताहरुको सक्रियता बढेको छ भने अर्कोतर्फ मोर्चाबन्दीको जवाफ मोर्चाबन्दीबाटै दिने रणनीतिमा पनि लागेका छन्, एमाले नेताहरु ।
सम्भाव्य चुनावी तालमेलका लागि उनीहरुले स्थानीय तहमा अन्य दलहरुसँग वार्ता र छलफल पनि तीव्र पारेका छन् । एमालेका सिरहा इन्चार्ज श्रेष्ठका अनुसार सिरहामा माओवादी र राप्रपासँग तालमेलका लागि स्थानीय तहमा वार्ता चलिरहेको छ ।
त्यसबाहेक, संघीय समाजबादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग छलफल शुरु भएको छ । एमाले नेतृत्वले तालमेल सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा पार्टीका स्थानीय कमिटिहरुलाई दिएपछि उनीहरु नै त्यसमा जुटेका देखिन्छन् ।
मधेशी मोर्चामा आबद्ध भए पनि ६ वटा मधेशकेन्द्रित दलको एकीकरणपछि बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम मधेशमा एकअर्कालाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्छन् ।
राजपाको मोर्चाबन्दी कांग्रेससँग हुने सम्भावना धेरै देखिएकाले पनि संघीय समाजवादी फोरमको एमालेसँग तालमेल हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम त मोर्चामै आबद्ध छैन ।
एमालेविरुद्धको सम्भावित मोर्चाबन्दीलाई अस्वीकार नगर्ने एमालेका सिरहा इन्चार्ज श्रेष्ठ भन्छन्, “हामी जनताका घर–घरमा गएर एमाले विरुद्ध फैलाइएको भ्रम चिर्छौ । मोर्चाबन्दी गरिए पनि फरक पार्दैन ।”
मोर्चामा आवद्ध दल, कांग्रेस र माओवादी भन्दा एमाले बलियो भएका ठाउँमा सबैको भोट एक ठाउँमा जाने सम्भावना एमाले नेताहरुले देखेका छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामले पनि दोस्रो चरणमा एमालेलाई रोक्न तराई–मधेशमा मोर्चाबन्दी हुनसक्ने संकेत गरेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “एक्लाएक्लै लड्दा त हामी बहुमतमै आउँछौं नि ।”
पहिलो चरणले उत्साह
एमालेले सञ्चालन गरेको मेची–महाकाली अभियान अन्र्तगत २३ फागुन २०७३ मा सप्तरीमा आयोजित सभा विथोल्न आएका मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच भएको झ्डपमा पाँच जनाको मृत्यु भयो ।
त्यही घटनाले प्रदेश २ मा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको एमाले पंक्तिमा पहिलो चरणको निर्वाचनको नतिजाले उत्साह थपेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, अन्य पार्टीबाट एमाले प्रवेश गर्नेहरुको संख्या बढ्न थाल्नु ।
तराई–मधेशमा पार्टी प्रवेशीको संख्या बढ्नुलाई पार्टीप्रतिको आकर्षण नै मान्न भने कठिन हुन्छ । किनभने एउटा पार्टीबाट उम्मेदवारको टिकट नपाउँदा अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने र उम्मेदवार बन्ने ‘संस्कार’ त्यहाँ हावी हुनपुगेको छ ।
गत चैतमा सिराहाको लहान नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख, माओवादी नेता मुन्निलाल साहलाई पार्टीमा भित्र्याएका एमालेले पछिल्लो पटक दिवंगत पूर्व सांसद हेमनारायण यादवकी श्रीमती एवम् पूर्व सभासद पारो यादव, उनका छोरा डा. नविन यादव, नेपाली कांग्रेसका प्रकाश कोइराला लगायतलाई पनि पार्टीमा भित्र्याएको छ ।
यसअघि महोत्तरीमा माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवम पूर्व सांसद मरमुद नदाफ, राजपाका नेता राजेन्द्र चौधरी लगायतका नेतालाई एमालेले भित्राएको थियो ।
पारो एमालेबाट माओवादी हुँदै संघीय समाजवादी फोरमको केन्द्रीय सदस्य भएर पुनः एमालेमै फर्किएकी हुन् । डा. नविन माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्य थिए ।
प्रदेश २ को निर्वाचन एमालेका लागि अन्यत्रभन्दा प्रतिष्ठाको विषय भएकाले एमालेले गाउँ, टोलसम्म घरदैलो अभियान तीब्र पारेको छ ।
एमाले सप्तरीका उप–सचिव प्रतापनारायण चौधरी ८ जेठमा थप गरिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाबाहेक सप्तरीका सवै ठाउँमा उम्मेदवार छनोट भइसकेको बताउँछन् ।
एमाले स्थायी समिति सदस्य एवम् प्रदेश–२ का संयोजक सत्यनारायण मण्डलका अनुसार १० जेठमा बस्ने प्रदेश कमिटिको वैठकले उम्मेदवार छनोट गर्न बाँकी रहेका नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख र उप–प्रमुखको टुंगो लगाउने छ ।
सिरहाको लहानमा एमालेले मुन्निलाल साहलाई नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनाउँदैछ । त्यसैगरी गोलबजार नगरपालिकाको प्रमुखमा श्याम श्रेष्ठ, योगेन्द्र सिंह र धर्मनाथ महतो मध्ये श्रेष्ठको सम्भावना ज्यादा देखिन्छ । श्रेष्ठ धर्मपूर गाउँविकास समितिका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।